Home News Yaa loo dhiibay lacagtii lagu bixiyay qorshihii fashilmay ee Puntland? Is eedeyn ka...
Yaa loo dhiibay lacagtii lagu bixiyay qorshihii fashilmay ee Puntland? Is eedeyn ka dhex bilaabatay dowladda iyo Kheyre oo teleefanada densaday! (xog Xasaasi)
Warar dheeraad oo ay heshay MOL ayaa cadeynaya in lacagta la doonayay in lagu kala furfuro ama dagaal beeleed looga abuuro magaalada Garowe loo wakiishay Xildhibaan Cabdishakur Cali Mire. Lacgata xalay loo xawilay Puntland ayaa lagu hagaajiyay labo shaqsi oo ka tirsan maamulka dowladda Puntland.
Kulan xalay saqdii dhexe ka dhacay xafiiska RW Kheyre oo ay goobjoog ka ahayeen xildhibaano oo MOL xogteeda heshay, ayaa lagu go’aamiyay in lacag $220,000 maanta loo xawilo magaalada Garowe. Lacagtaas aya loogu talagalay in lagu abaabulo dagaal iyo kacdoon ka dhaca magalaada Garowe si uu u baaqdo shirka Dowlad Goboleedka oo maanta lagu wado in uu ka furmo Magaalada Garowe.
Kulankii xalay ayaa lagu soo bandhigay qorsho loogu magac daray “ka hortaga qaswadayaasha”. Waxaana la isla gartay in lacagta la diraayo lagu qabto afar shaqo oo is barbar socota;
in mudaharaad baahsan laga abaabulo magaalada Garowe, iyada oo lacag la siinayo dadka qaxootiga ee ku nool duleedka magalaada Garowe, qorshaha lagu heshiiyay aya ahaa in saakay sagaalka subaxnimo laga bilaabo isku soo bax ay dadka isaga imanayaan labada dhinac ee Magaalada Garowe. Dadkaas shacabka ah aya ku dhawaaqi doono erayo ay ka mid yihiin “Puntland ma noqoneyso golihii lagu dumin lahaa dowladda Soomaaliya iyo erayo la mida. Waxaana dadka loo qeybinayaa boorar iyo calanka Soomaaliya oo fara badan.
In ciidmada jooga madaxtooyada loo balan qaadpo lacag $300 boqol ah askarigiiba, oo inta uu ka socda mudaharaadka magaalada Garowe bartamaheeda ay ciidanka la wareegaan madaxtooyada oo ay u diidaaan MW Cabdiwali Gaas in uu ka soo baxo Madaxtooyadda. Ciidanka waxaa hogaamin doona saraakiil ka soo jeeda beesha Ciise Maxamuud ee awood ciidan ku leh degaanka Gobolka Nugaal.
Inta ay socoto wadahdalka ciidanka Madaxtooyadda qabsaday, aya dhanka kale ciidan kooban la wareegayaan Garoonka Janaraal Maxamed Abshir, taasi oo suuragal ka dhigayso in aan diyaarad ka soo degin garoonka, gaar ahaan diyaaradaha wada madaxda dowlad Goboleedyadda.
In dhamaan warbaahinta Puntland lacag loo qeybiyo si ay u baahiyaan isbadalka ka dhacay deegaanka Puntland. Dhanka kale ciidanka Baraha Bulshada ee xafiiska RW Kheyre ayaa iyagana dhankooda waxa ay baahin doonaan in sharkii Garowe baaqday. Shacabka reer Puntland-na ay diideen in dowladda Fedaraalka laga mucaarado deegaanka Dowlad Goboleedka Puntland. Fartiintaan ayaana ku qasbi doonto in madaxda dowlad Goboleedka ayan u soo safrin Puntland halkaasna uu ku baaqdo shirka Garowe.
Barnaamijkaan qaabeysan oo aad looga soo shaqeeyay isla markaana uu hogaanka u hayey RW Kheyre, gadaalna uu ka riixayo MW Farmaajo aya waxaa lacagta ku baxaysa loogu dhiibay in uu gaarsiiyo kooxaha abaabulaya kacdoonka Xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire iyo Fahad Yaasin oo si gaar ah u kaalmaysanayaan Xildhibaan Cali Hoosh. Inkastoo uu Xildhibaan Hoosh oo qadka taleefanka lagu hadlayay uu muujiyay in uusan ku qanacsaneynin talaabada la qaadayo hadana waa uu aqbalay fakarka RW Kheyre. Dhanka kale waxa si joogta loola socodsiinayay qorshaha socda Madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiim Cabdullahi Xaaji Cumar (Cameey) oo codsaday in aan isaga si toos ah loo galin shaqada socoto magaciisana aan la sheegin. Laakiin aad buu uga warhayay shaqada socotay waana uu ku qanacsanaa.
Dowladda Puntland oo ah dowladii ugu horeeysay ee ka hirgashay dalka Soomaaliya ka dib markii dagaalka sokeeye dhacay ayaa waxa ay leedahay taariikh xoogan iyo isimo/salaadiin ku adag adkeeynta midnimada Puntland. Saakay salaada subax markii la dukaday ayaa waxaa la ogaaday qorshaha laga soo abaabulay xafiiska RW Kheyre, raalina uu ka yahay MW Farmaajo. Waxaana durbadiiba ay bilaabeen salaadiinta, aqoonyahanadda, Ururada Bulshadda Rayidka iyo qaar ka mida saraakiisha ciidanka in la fashiliyo qorshaha RW Kheyre kaas oo keeni karay in dagaal sokeeye ka dhaco deegaanka Puntland.
Waxaa muuqata in RW Kheyre uusan aqoon buuxda u laheynin dadka iyo deegaanka Puntland. Midnimadda iyo dowladnimadda Puntland waa mid shacabka reer Puntalnd ayan marnaba ogolaaneynin in laga dumiyo. Waxaana muuqata in RW Kheyre uu kala garan waayay Puntland iyo Galmudg? Shacabka reer Puntland oo aad u taageersanaa dowaladda Fedaraalka ayaa waxa muuqata in ay kalsoonidii kala noqdeen dowladda uu hogaamiye Madaxweyne Farmaajo.
Dadka reer Puntland oo ka careeysan ficilkii laga soo abaabulay xafiiska RW Kheyre ayaa la filayaa in ay si balaaran u soo dhaweeyaan madaxda Dowlad Goboleedyadda oo galabta ku beegan Magaaladda Garowe.
Previous articleAxmed Baasto. Musharaxii Kheyre oo qol mugdi ah lagu doortay.
Next articleWasiirka Qorsheynta Jamaal oo gaaray magaalada Dooxa si uu u saxiixo…(akhriso)
Ciidamada kenya oo xiray Gudoomiye Degmo iyo xiisad xoogan oo ka...